स्वेता खड्काले बिहे गरेपछि , मुकुन्दले हाने कडा प्रहार? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/स्वेता खड्काले बिहे गरेपछि , मुकुन्दले हाने कडा प्रहार?
स्वेता खड्काले बिहे गरेपछि , मुकुन्दले हाने कडा प्रहार?
5,412 1 minute read
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री श्वेता खड्का सोमबार विवाह बन्धनमा बाधिँइन् । उनी धनगढीका विजयन्द्र सिंह रावतसँग विवाह बन्धनमा बाधिँएकी हुन् ।सोमबार काठमाडौँको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा सिमित पारिवारिक सदस्य र साथीहरूको उपस्थितिमा विवाह सम्पन्न भयो । पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको करिब ६ वर्षपछि श्वेता विजयन्द्र सिंहसँग विवाह बन्धनमा बाधिँएकी हुन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सोमबार विवाह सम्पन्न भएपछि मुकुन्द सामाजिक सञ्जलामा एस्तो स्टाट शेयर गर्दै श्वेता खड्कालाई घोचेका हुन् । उनले स्टाटसमा आफुले हिजो त्यही मृत डान्सरलाई सम्झेर बस्छु भन्दै रुँदै फिल्म चलाएर पैसा कुम्ल्याउने नानी आज कुम्लो बोकेर अर्कोसँग हिंडिन् एस्तो भनेका छन् ।
रमेश प्रसाईको बिहेमा भाबुक हुदै कल्पनाले खेलीन दोहोरी, थाम्न सकिनन् आँसु (हेर्नुहोस भिडियो)
कल्पना दाहाल र रमेस प्रसाईको बीहे हुने कुराले सामाजी संजाल मा भाईरल भयो समाज मा एक किसिमको छाप पर्न गयो । हुनत कलाकार हरुले गर्ने हासीमजक ले सामाजिक संजाल तात्नु कुनै नौलो कुराभने होईन । कल्पनाले रमेशलाई आफ्नो एक असल साथी को रुप मा लीगेको छु पनि उनले सामाजिक संजाल मा भनेकी पनि थीईन ।
रमेश प्रसाईँ पनि सामाजिक अभियन्ता हुन् । साथै उनले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्ना विचारहरु राख्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय भने प्रसाई फरक परिचयका साथ युट्युबमा छाएका छन् ।
उनी अहिले दोहोरी गायकका रुपमा चर्चामा छन् । रमेशलाई पछिल्लो समय ‘रिंकेबुङको राँगो’ बोलको गीतले चर्चामा ल्याएको छ । उनी पछिल्लो समय इन्द्रेणीमा समेत आवद्ध छन् ।
पूर्वी नेपालमा एक रेडियो पत्रकारका रुपमा स्थापित भएका दुबै आँखा देख्न नसक्ने युवक रमेश वक्तृत्व क्षमताका कारण नेपालभर परिचित छन् । उनी ‘मोटिभेशनल ट्रेनर’ का रुपमा थुप्रै जिल्लामा समेत पुगिसकेका छन् ।
एस्तै बीच कालिकोटका रमेस प्रसाई र नन्दाको प्रेम समंद भयको ३ बर्स सम्म गोप्य नै रह्यो । सामाजीक संजाल मा जब बीबहाको कुरा निस्कियो कल्पना र रमेस प्रसाई बीच को समंद पनि छताछुल्ल भयो । कल्पना रमेस लाई मन पराउने कुरा सोभाबिक नै हो भन्ने धेरै दर्सक को अनुमान पनि रहेको छ ।
आज मंगसिर २२ गते हुदै गरेको बेहेमा कल्पना आफ्नो सबै भन्दा करीबी मित्र को बेहेमा पुगेकी छिन् । हेर्नुहोस रमेस को बेहे मा कसरी नन्दलाई सिन्दुर हालेको हेरिन कल्पनाले भिडियो जस्ता को तेस्तै । एस्तैमा नन्दाले प्रसाईलाई बैबाहिक जिबनको शुभकामना पनि बेक्त गरेकी छिन् । हेर्नुहोस भिडियो :
अन्तत : यसरि सोझोपनको फाइदा उठाएर साच्चैको बिहेको नाट#क गरिएको भनीएका सम्पर्कमा(भिडियो हेर्नुस्)
३ श्रीमानको १ श्रीमती बनेकी बन्दनाले माइलोको मंगलसुत्र गालेर कान्छोलाई सिक्री बनाएको खुलासा
राहुल र स्मिताको पुनर्मिलन भएपछि एक युवा आ’क्रोशित, के छ कारण? (भिडियो सहित)